727 Liveries နှင့်အတူ DOWNLOAD ဘိုးအင်း 200-153 FSX & P3D & FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 365 ကို MB
downloads ရယူရန္ 93 526
Author: VistaLiners, လင်းယုန် Rotorcraft Simulator ဖွငျ့ဇာတိပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မော်ဒယ်များဒါဝိဒ်သည် Grindele, ပြင်ဆင်ချက်များတည်းဖြတ်သည်နှင့် Rikoooo အားဖြင့် repack
10 / 03 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : သာ, လက်ဝဲမှလေယာဉ်ပျက်ကျမှု "Overstressed" ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဘိုးအင်း 727-200Adv ၏ Aircraft.cfg ဆုံးမခြင်းကိုလွှဲရှောင် Fixed ရှေ့ဆင်းသက်ဂီယာကာတွန်း။
10 / 03 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : ဇာတိ FSX မော်ဒယ်, 100% သဟဇာတ Prepar3D v4 + သောမတ်စ်ရုသဆီကနေ FMC (အဘယ်သူမျှမ INS) နဲ့သစ်ကိုကို virtual cockpit နဲ့ 2D panel က V-မြန်နှုန်း gauge, မြေပြင် Utility ကိုတစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်သစ်ကိုတိကျတဲ့အသံ, texture ပြင်ဆင်ချက်ပျောက်ဆုံး, Aircraft.cfg နှင့် Panel.cfg အတွက်မျိုးစုံ bug တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်, လိုက်လျောညီထွေ repaints, ပျောက်ဆုံးခတ်နှင့်တံခါး2animations တွေကို၏ပြင်ဆင်ချက်၏။
02 / 04 / 2015 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : အ panel ကို B727 ပြသကြောင်း Fixed B2 737D panel ကိုအသစ် panel ကို 2D ဆက်ပြောသည်။
ဤတွင်ဘိုးအင်း 727-200 VistaLiners ဖြစ်ပါသည် / အဲ Cantu မူလက FS2004 ဘို့ဘို့ကူးပြောင်း FSX & P3D။ ဤသည်စူပါအထုပ်အမျိုးမျိုးနှင့်နိုင်ငံအများအပြားကနေ 154 liveries တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဘဏ္ဍာကိုအတူရရှိနိုင်ပါ! ဤသည်ကျိကျိတက် pack ကိုသဟဇာတဖြစ် FSX / FSX-Steam Edition ကို / P3Dv1 v2 v3 v4 ။ ပြင်ဆင်ချက်မူရင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤဗူး၏တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. Rikoooo ဖွငျ့ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်တချို့ပျောက်ဆုံးနေပုံငယ်များကဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်နှင့်ပြင်ဆင်ချက်ဟာ Aircraft.cfg ဖိုင်ထဲမှာလုပ်ခဲ့ကြသည်အသစ်အသံနှင့်တစ်ဦး 2D panel ကိုအထူးဘိုးအင်း 727 ပါဝင်သည်။ ပါဝင်သည်3မော်ဒယ်များ (စံ, Cargo နှင့်အဆင့်မြင့်)
ဒီအထုပ်ကိုတည်းဖြတ်ဒါဝိဒ် Grindele မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ။
Posky ဘိုးအင်း 737-800 အိုကေလေကြောင်းလိုင်း FSX